Akhri: Kenya & Axmed Madoobe oo bilaabay howlgal milateri oo Shabaab iyo federaal iska riix ah! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada Kenya waxey bishii October ee sanadkii 2010 soo galeen Soomaaliya, iyagoo sheegaya iney la dagaalamayaan Alshabaab oo weeraro ugu geystay gudaha dalkooda, waxey horay usoo raaceen Axmed Madoobe oo Shabaab ka mid ahaan jiray hase ahaatee la dagaallamay, oo qax ku galay gudaha Kenya.
Bishii July ee sanadkii 2012 ayay ciidamada Kenya si rasmi ah ugu biireen AMISOM, kadib markii joogitaankooda gaarka ah ay walaac ka muujisay dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Kenya oo dagaal kazoo bilaabay xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhamaankii bishii September ee sanadkii 2012 Alshabaab ka qabsaday magaalada muhiimka ah ee Kismaayo.
Wixii xiligaas ka dambeeyey, Kenya waxey jilibka laabtay Kismaayo iyo magaalooyin yaryar ee ku yaalla qeybo ka mid ah Jubada Hoose. Intii ay Kismaayo fadhiyeen waxaa meelo badan laga saaray Alshabaab, iyaguna wax dagaal ah kuma qaadin Alshabaab.
Shalay oo ay taariikhdu aheyd 6-da bisha October sanadka 2014 ayay ciidamada Kenya oo ay wehliyaan ciidamada Axmed Madoobe ka dhaqaaqeen Kismaayo, waxeyna u jiheysteen dhanka woqooyi ee soo xiga gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale jihada gobolka Jubada Dhexe.
Weerarka ciidamada Kenya iyo kuwa Axmed Madoobe ku qaadeen deeganada Alshabaab maamulaan ayaa loo arkaa maseyr ay ka qaadeen dhaqaaqa degdeg ah ee ay dhanka gobolka Shabeellaha Hoose ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa AMISOM, gaar ahaan ciidamada Uganada oo shalay si rasmi ah ula wareegay Baraawe.
Dowladda Federaalka ah iyo maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo, dowladda Kenyana gadaal ka riixdo ayaa xafiiltan ka dhaxeeyaa, waxaana muuqata in Axmed Madoobe iyo Kenya ka hor dhacayaan in ciidamada DF ah iyo kuwa Uganda gaaraan meelo ka mid ah Jubada Hoose ama Jubada Dhexe.
Maxamed Xaaji Cusmaan oo ah gudoomiyaha Qoryooley ayaa 21-kii bishii September warbaahinta u sheegay in ciidamada Soomaaliya, kuwa AMISOM ee jooga Shabeellaha Hoose ay qaadayaan dagaal lagu qabanayo Baraawe, Diinsoor oo gobolka Baay ah, Bu’aale, Jilib iyo Jamaame oo Jubada Dhexe ah.
Haddii Jilib iyo Jamaame ay tagaan ciidamada dowladda Federaalka ah iyo kuwa AMISOM ee markii hore Muqdisho ka baxay waxaa magaalooyinkaasi hoos imaanayaan Federaalka, waxaana sida muuqata Axmed Madoobe iyo Kenya howlgalka ciidan ee ay shalay bilaabeen ku doonayaan iney deegaanada Jubooyinka ee ka maqan gacanta uga dhigaan Alshabaab iyo dowladda Federaalka ah.
Dowladda Federaalka ah ayaa rabta in dhulka Soomaaliya oo dhan hoos yimaado, halka maamulada JUBA ka mid yahay uu doonayo inuu magac ahaan sheego inuu DF hoos yimaado, basle uu danihiisa gaar ah qabsado.
Waxaa shaki badan abuuray waxa howlgalka ciidamada Kenya ee labada sano fadhiyey kusoo beegay kadib markii Howlgalka Badweynta Hindiya ee DF iyo AMISOM ka bilaabeen labada Shabeelle uu gaaray degmooyinka aad uga fog Muqdisho, sida Cadale iyo Baraawe.
Loolanka federaalka iyo maamulka Juba ee Kenya taagreeto ayaa u muuqda mid lagu kala boobayo dhulka Alshabaab maamulaan, iyadoo qolo kasta u gulfineyso iney qabato dhulka ugu badan inta aan qolada kale gaarin.
Maleeshiyo taabcsan Khaatumo oo weerar gaadmo ah ku qaaday ciidanka Somaliland